Ọrụ na Saudi Arabia The Complete List of Companies to Apply 🥇
Ọrụ na Saudi Arabia - Ndepụta ụlọ ọrụ dị na Saudi Arabia
Ọrụ Ndị Ọchịchị na Dubai Maka Expats
Malite ọrụ ọhụrụ na Middle East!
Ọrụ na Saudi Arabia
Ọrụ na Saudi Arabia bụ otu n'ime ndị kachasị mma na klaasị. Ndi isi ulo oru Saudi mara dika otu n’ime ndi isi ahia kachasi nma. N'iburu n'uche nyocha ọrụ, ịkwesịrị ịtụle Saudi Arabia. Companylọ ọrụ anyị na-ede edemede banyere nyocha ọrụ na Saudi Arabia. Anyị na-anwale ịrụ ọrụ na ozi ole na ole gbasara esi achọta ọrụ na Middle East. Agbanyeghi na nka nwere ike buru eziokwu anyi bu otu n’ime kacha mma maka Ọrụ na Middle East n'ihe banyere ndụmọdụ maka saịtị ọrụ.
Ezigbo ihe banyere Ọrụ na Saudi Arabia
N'ezie, Saudi Arabia bụ mba Arab. Ọ dị n'ime ebe kacha mma na Middle East. Mba Saudi Arabia na-arụ ọrụ maka ọtụtụ mpaghara Arabian Peninsula. Saudi Arabia na-achịkwa ebe 830,000m2. N'aka nke ọzọ, mba Saudi bụ nke ise kachasị ukwuu na Asia. Ya mere, dabere na isi ihe ahụ. Ị nwere ike chọta ọrụ na mba a dị ka nwanyị na-agafe.
N'okpuru ọnọdụ ndị a, ebe a bụ maka ndị ọgbọ. Ọ bụkwa mba nke abụọ kasị mba Arab. N'ozuzu, Saudi Arabia mba. Ndi onu ogugu a choro ka ha bu 35 nde ?. Ya mere na ogologo oge ma ọ bụrụ na ị na-achọ ọrụ. Ị nwere ezigbo ohere ịchọta ọrụ n'ebe ahụ. Ọ bụkwa ezi uche na ọ ga-abụ abanye na otu ìgwè WhatsApp anyị. N'ebe ahụ ị ga-achọta ọtụtụ ọkpụkpọ òkù na ndị ọzọ.
Ozi Saudi Arabia
N'akuku ala Saudi Arabia na-eme ka ọ bụrụ mba 40th kasị ukwuu n'ụwa. Na nsoro dabere na ndị bi na e nwere ezigbo ebe maka ndị na-achụ nta. N'oge na-adịghị anya ma ọ bụ mgbe e mesịrị, ọtụtụ ọrụ mmanụ sitere n'aka Ụlọ Mmanụ. Ihe ọzọ dị mkpa maka Saudi Arabia. Ndị isi na-arụ ọrụ na ndị dị ndụ bụ Arabic. Na n'ezie, isi okpukpe bụ Islam.
N'iburu nke a n'uche, gọọmentị Saudi bụ 100% Alakụba. N'akụkụ na-adịghị mma, ọ bụ ọchịchị zuru oke. Ya na eze na onye isi okpueze na osote onye isi ala. Site na nlebara anya na ego, ego bụ Riyal. Dị ka ihe atụ nke ịhụnanya Allah. Ọ dịghị Chineke ma Allah na Muhammad bụ onye ozi nke Allah. A na-eme ọkọlọtọ Saudi Arabia na agba nke akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na ọcha. Ya mere, ebe a bụ otu n'ime ihe kacha mma maka ndị na-achọ ọrụ.
Ndị ọrụ nke Saudi Arabia
Saudi Arabia Ụlọ ọrụ na Middle East
Kedu ka esi etinye maka ọrụ na Saudi Arabia?
Iji tinye ya n'ụzọ ọzọ, ụlọ ọrụ a na-akpọkarị ATCO. ATCO ụlọ ọrụ dị iche iche nhazi oge òtù ahịa. Dịka ọmụmaatụ, ụlọ ọrụ dị na Dammam na Saudi Arabia.
Ọ dị mkpa ịghọta na Atco na-arụ ọrụ ebe ọ bụ na 1950s. Ihe ka ukwuu na-egosi na ụlọ ọrụ bara uru iji nweta ọrụ dị mfe. Ụlọ ọrụ ahụ bụ Abdulrahman Ali Al-Turki kpamkpam. N'ebe dị mma maka onye ịchọrọ ọrụ. N'iburu nke a n'uche, òtù ATCO nwere iri abụọ na atọ ahia dị iche iche dị na Saudi Arabia. A ghaghị icheta ụlọ ọrụ ahụ na-achịkwa nnukwu ego na Middle East. N'ikwu okwu n'ozuzu, otu ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ na nkwonkwo na ndị ọzọ Ụlọ ọrụ Dubai.
Iji ichikota ihe omume AA Turki Group mejuputara otutu ngalaba aka oru. Maka akụkụ kachasị, ụlọ ọrụ na-enweta ndị ọrụ maka ezigbo ohere. Na nchịkọta azụmahịa na owuwu ọrụ na Middle East. Ọrụ na-ere ahịa na ọrụ IT na Saudi Company bụ ụzọ iji merie egwuregwu. Site n’oge ruo n’oge ị nwere ike ịnweta ohere ọrụ blog.
ATCO gụnyere nsonye 23, ụlọ ọrụ na-arụkọ ọrụ, na ụlọ ọrụ na-eguzo naanị. Ìgwè ahụ na-enye ohere dịgasị iche iche maka ohere maka ndị na-ere ahịa. Tinyere otu n'ime ihe kachasị mma:
Ngwaahịa ekwentị & Ọrụ
Akpaaka & Control
Ahịa ahia & Ọrụ
Ọrụ Port & Ọrụ Mmiri
Injinia na nkwekọrịta
Mmanụ & Gas Ngwaahịa & Ọrụ
A na-emekarị akụkọ ndị gara aga nke ọma na Middle East. A malitere ntọala Abdulla Fouad Group (AFG) na 1947s na Ras Tanura, Saudi Arabia. Kemgbe ahụ na-eto eto nke ukwuu ka ndị ọ bụla na-achọ ọrụ. N'ezie ị ga-enwe ohere ịchọta ọrụ n'ebe ahụ na inwe MBA.
Nyere ụlọ ọrụ isi mmalite ndị a dị ka obere ụlọ ọrụ na-ewu ụlọ na Middle East. Ma na nyocha ikpeazụ nke ndozi. Companylọ ọrụ Dubai taa bụ otu ọrụ dị iche iche na mmepụta ohere ahia.
Tinyere ụlọ ọrụ na-ahụ maka nkà na ụzụ nke nwere nkà mmụta sayensị dị omimi. N'ezie tinyere azụmahịa ụlọ akụ. Ụlọ ọrụ ahụ nwere nnukwu ọrụ ndị ọrụ ebere na ego na azụmaahịa na Saudi Arabia.
N'aka nke ọzọ, ụlọ ọrụ na-ere ahịa Abdulla Fouad. Bụrụnụ ndị ewu ewu na Middle East. N'ezie, ụlọ ọrụ nwere ọtụtụ ụlọ ọrụ na nkewa. Dabere na nke ị nwere ike zipu CV gị na ụlọ ọrụ Dubai a na 2018.
Ụlọ ọrụ na-achọ ndị ọrụ na Oil & Gas. Ọzọkwa, Industrial na Construction ọrụ ohere na-abịa n'Ịntanet. Ndi AFG Group abughi nani ndi na - achota ndi na - ahu maka ndi ahuike na ala maka ọrụ ego. Ụlọ ọrụ ahụ na-achọkwa ndị na-elekọta ụlọ ọrụ na Ozi na Technology.
Ụlọ ọrụ ahụ nọkwa n'etiti ndị ụlọ ọrụ 100 kacha elu na Saudi Arabia. dị ka eziokwu nke AFG Group na-eje ozi na ebe nile Alaeze nke Saudi Arabia. N'ikwu okwu n'ozuzu, otu ụlọ ọrụ nwere netwọk ọrụ ịchụ ego na United States, Europe, na Asia.
Ọrụ na Saudi Arabia - Abulla Fouad.
Di elu Electronics Company Limited (AECL)
Dubai Company nwere njedebe nzukọ na Saudi Arabia. Ọ bụ ezie na nke a nwere ike ịbụ ezi ụlọ ọrụ amalitere na 1988.
N’aka nke ọzọ, AEC nwere ọhụụ na teknụzụ ọhụụ. AECL karịrị nyocha na imepụta ngwa eletriki dị elu ụlọ ọrụ na Middle East. N'iburu nke a n'uche ndị ọrụ maka ụlọ ọrụ maka ngalaba nchekwa na ngalaba nkwukọrịta Saudi Arabia.
N'okpuru ọnọdụ ndị a, ihe mgbaru ọsọ nke AEC ga-abụ otu n'ime ihe kacha mma. Na-ekwu okwu n'ozuzu na mpaghara mpaghara. Dị ka e kwuru na ọganihu ọhụrụ ụlọ ọrụ nwere ọganihu na teknụzụ mmepụta na nkwurịta okwu. Ụlọ ọrụ a ego ndị India. Yabụ ma ọ bụrụ Ọpụpụ ndị India should ga-ezitere CV gị.
Maka ọtụtụ akụkụ, otu ụlọ ọrụ bụ otu n'ime ihe kachasị mma na nkwado ngwaahịa. Ụlọ ọrụ a dị ịtụnanya na 2006 abanyela aka nkwekọrịta nwere mmasị. Ụlọ ọrụ Dubai na-ejikwa Acer mee ihe ọhụrụ. AECL na-arụpụta kọmputa onwe ya na Middle East. Nke ahụ na-aghọkwa ọrụ ọhụrụ maka akụkụ nke usoro usoro gọọmenti Saudi na-eme ka PC dị ọnụ ala nye Saudi Arabia.
Ọrụ na Saudi Arabia - Advanced Electronic Company.
Soro ndi otu ndi otu ha taa. Iji kwu eziokwu, ọ bụrụ na ị na-achọ ọrụ na Dubai. AH ALGOSAIBI & BROS. Ihe ịga nke ọma azụmaahịa a nke Saudi Arabia ọtụtụ afọ gara aga. N'otu oge, Saudilọ ọrụ Saudi a na-amalite site na ndị njikwa pụrụ iche. N’aka nke ọzọ na ọgbakọ Middle East na-enye ọgụgụ isi, ọkachamara maka GCC Mba. Na ọrụ ndị ọzọ dị elu ọ bụghị naanị ndị ahịa GCC. Mana ọrụ ha gụnyere Dubai City.
Ị bụ Na-achọgharị Job na Saudi Arabia? Ahmad Hamad Al Gosaibi & Brothers, n'eziokwu, ọ ga - ewetara gị ohere ọrụ dị ịtụnanya na Kingdom of Saudi Arabia. N'otu oge, ị nwere ike ide maka CV gị emelitere. Buru nke a n'uche, can nwere ike ịnwe nkwado mmepe ọrụ na ohere niile siri ike.
Companylọ ọrụ na-etinye nnukwu uru na ndi nile n’achu oru n’onye sonye aka n’oru ulo. Isi okwu ọzọ na ụlọ ọrụ Ahmad Hamad Al Gosaibi & Brothers bụ ụkpụrụ omume na ụkpụrụ omume. N'akụkụ dị mma, ịdị mma na mmepe onye ọ bụla na ụlọ ọrụ bụ ihe dị mkpa n ’ala Arab.
Ụlọ ọrụ ahụ nwere ụgwọ ọrụ na njirimara gburugburu mba GCC. N'okpuru ọnọdụ ndị ahụ, ụlọ ọrụ ahụ na-etinye ndị na-ahụ maka ndị isi obodo. Na ụlọ ọrụ a, ị nwere ike ịzụlite na ịchụso ọrụ gị na Saudi Arabia azụmahịa ụwa. Maka nke a, ịnwere ike ịbanye n'òtù ndị ọrụ ụlọ ọrụ ma were azụmahịa gaa n'ọzọ ọzọ.
Na nyocha ikpeazụ, ụlọ ọrụ ahụ na-arụsi ọrụ ike na-acho ndi isi ulo oru ndị na-achọ ọrụ na Saudi Arabia. Can nwere ike itinye na-ezighi ezi na adreesị ozi-e ha.
Ọrụ na Saudi Arabia na Ahmad Hamad.
Al Baik Ụlọ oriri na ọṅụṅụ & Ogwe
Ọ bụ ezie na nke a nwere ike bụrụ eziokwu na ha na-eje ozi nri kacha mma n'obodo. Na ALBAIK ụlọ ọrụ ị nwere ike ịchọta ọrụ ahịa na ọrụ ọrụ njikwa. N'ihi nke a, ụlọ ọrụ ahụ kwenyere na ndị òtù otu kachasị mkpa na azụmahịa nri.
Maka nke a Al Baik Restaurants & Bars. Ọ na-agba mbọ ịmepụta ụlọ ọrụ ọ bụghị naanị maka ndị ọrụ Saudi mana kamakwa Ndị India na Pakistan na-achọ ọrụ. N'okpuru ọnọdụ ndị a, ọdịbendị nke ịrụkọ ọrụ ọnụ na ịkwanyere ibe ha ùgwù. Inyere mba di iche iche aka imekota aka.
N'ikwu ya na nke a n'echiche, ị ga-enwe ike ịkwalite site n'ọkwá dị elu na onyeisi ndị isi. N'ikpeazụ, ụlọ ọrụ na-enye onye otu ọ bụla so na-enyere aka inweta nkwalite n'ime afọ. Dika edere ya na nkwado nile gi na ulo oru a nwere.
na inweta ohere ohere ịzụlite na ito eto nke onwe ya na-arụ ọrụ maka ọrụ nke Saudi Arabia Saudi Arabia. Yabụ ichikota iji arụ ọrụ na Al Baik ụlọ oriri na ọ barsụ &ụ na Ogwe iji nweta ike zuru oke bụ isi ihe maka ọganiihu gị.
Ọrụ na Saudi Arabia na Al Baik Ụlọ oriri na ọṅụṅụ.
Al Bilad Bank na Saudi Arabia
N'oge na-adịghị anya, ị ga-achọ ihe ndị ọzọ ị ga-achọ. I kwesịrị ile anya Bank Albilad bụ onye Saudi Arabia. Iji bido, ozi nke ụlọ akụ a bụ ụlọ ọrụ nkwakọ ngwaahịa. Na-ekwukarị, Al Bilad Bank guzobere vide Royal Iwu na nnukwu isi ụlọ ọrụ nke 5,000,000,000 Saudi Riyals. Ka ọ were na-eme ka ezigbo ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ.
Bank Albilad dị ka ụlọ ọrụ akụ na ụba na-achọ ịgbasa dum Saudi Arabia. Ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ na obodo ọhụrụ na mpaghara ọhụrụ. N'egbughị oge na mgbakwunye na ndị ọrụ mpaghara na Saudi Arabia ụlọ ọrụ na-enye alaka ndị inyom na ụlọ ọrụ nlekọta ego. N'ihi ya onye ọ bụla nwere ike iji ọrụ ha.
N'inye ihe ndị a, Bank Albilad na-enye ọrụ maka ndị ahịa ọhụrụ. Ndị ọkwọ ụgbọ mmiri na Saudi Arabia nwere ike iji ngwaahịa na ọrụ ego niile na ọkwa na ngalaba niile. N'oge ugbu a, ị nwere ike ịtụ anya ọtụtụ ohere ọrụ. Iji malite na ọrụ na ego azụmahịa na ọrụ ngwa ngwa na ụlọ ahịa Banyere ego. Tinyere ọrụ ego na-arụ ọrụ na Saudi Arabia.
Ọrụ na Saudi Arabia na Al Bilad Bank.
Al Faisaliah Group otu n'ime ebe kachasị mma maka ọrụ. Companylọ ọrụ Saudi na-ejidere onwe ya na Middle East. Maka ebumnuche azụmaahịa, ụlọ ọrụ na-eto eto na-aghọ ndị nwere ọtụtụ azụmahịa. Iji tinye ya n'ụzọ dị iche, na nke a, ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ bụ Saudi Arabia na na-eje ozi na Middle East. Ihe mbu ị ga-echeta mgbe ị na-etinye akwụkwọ maka ọrụ azụmaahịa na Saudi Arabia. Na mkpokọta ụlọ ọrụ Saudi Arabia hiwere na 1971.
N'ebe dị mma, Al Faisaliah Group na-ahazi ọnọdụ dị n'etiti ndị na-achọ ọrụ na azụmahịa na nri. Companylọ ọrụ ahụ na-eto ugboro ugboro na ahịa elektrọnik & Sistem na Middle East. Maka nke a, ịnwere ike inweta ọrụ na Ahụike na Ọrụ Nri. N'ikwu okwu n'ozuzu, otu ahu bu ghọtara n'ofe mpaghara GCC.
N'ikpeazụ, ọ bụ ọrụ nchịkwa ndị ọkachamara. Na-enwe obi ụtọ mgbe niile nye gi aka na mkpa ndi agha. Na mmekọrịta ya na ogologo oge ya na ndị isi ụlọ ọrụ ụwa dum ga-enyere gị aka inweta ọrụ na Riyadh. Maka ọtụtụ akụkụ, ụlọ ọrụ gụnyere Sony, Danone, Philips, na Accenture.
Ọrụ na Saudi Arabia na Al Faisaliah Group.
Riyadh Daily na Saudi Arabia
Na itule, nwaa inweta oru n’ime akwukwo akuko. Ọrụ dị na mgbasa ozi ghọrọ ihe kachasị ama nke ndi isi ala Saudi. Riyadh Daily nke Al-Yamamah Press Establishment bipụtara. Nyere ụlọ ọrụ ihe ndị a bụ nke mbụ ndị Bekee na-ebipụta kwa ụbọchị site na isi obodo Saudi.
Mee elu mee ala ma ọ bụrụ na ị na-achọ ọrụ na mgbasa ozi na nkwukọrịta. Biko gbakwunye ịmaliteghachi na akwụkwọ mgbasa ozi nke nwanne ya nwanyị, akwụkwọ akụkọ Arabic Al-Riyad. Dika okwuru, Riyadh Daily nwere ogologo akụkọ na ụlọ ọrụ mgbasa ozi nke Alaeze.
Riyadh Daily na ụlọ ọrụ akụkọ ihe mere eme bipụtara akwụkwọ akụkọ na 1960 tupu e mepụta ya n'ime akwụkwọ mgbasa ozi na 1985. Nwekwara ike ịchọta ndị ole na ole agencieslọ ọrụ na-ewe ndị ọrụ na Dubai ndị bụ mbanye maka ụlọ ọrụ a.
Ọrụ na Saudi Arabia na Riyadh Daily.
A Al Tazaj na Saudi Arabia
Ụlọ oriri na ọṅụṅụ na Buraidah, otu n'ime ọrụ kacha mma maka ndị mba ọzọ. N'ikwu eziokwu, enwere ụlọ oriri na ọ industryụ industryụ a tọrọ ntọala 1989 karịa 28 afọ gara aga. N'iburu nke a n'uche, ị kwesịrị ịgbalị inweta ọrụ na ụlọ ọrụ a. Ọtụtụ ndị ọrụ na-azụ ahịa ọrụ n'ime ụlọ ọrụ a.
Ọ bụrụ na ị na-ekwu okwu mgbe niile na-ekwu okwu ọdịbendị ọdịnala dị mma ụzọ ịchọta ọrụ. N'ime ụzọ ọrụ ị ga - esi tinye ego na - akụrịrị gburugburu ebe obibi na mba GCC. Iji bido ọrụ na Saudi Arabia ịkwesịrị iziga CV gị. Ị nwere ike nweta ọrụ na Middle East. Bulite gị malite na ụlọ ọrụ a na GCC.
Ụlọ oriri na ọṅụṅụ Al Tazaj na-anabata CV maka ọtụtụ ọnọdụ si ndị ahịa ahịa ụwa. N'azụ bido ọrụ dị maka azụmaahịa na ọnọdụ ọnụọgụ. Ruo ugbu a ziga CV ma ọ bụrụ na i nwere mmasị n’ọkwa ndị okenye.
Ọrụ na Saudi Arabia na An Al Tazaj.
BỤTA Ụlọọrụ Petroleum na Ụgbọ njem
Ihe dị mkpa ịmara nke ahụ bụ ụlọ ọrụ nkwakọ ngwaahịa Saudi. Nyere isi ihe ndia inweta nnukwu ọrụ na nnukwu ụlọ ọrụ mmanụ mmanụ bụ ọrụ a na-akwụ ụgwọ na Saudi Arabia. Ruo ugbu a ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ na-ere ahịa ma na-eburu ibu ebugharị ngwa ahịa nzukọ na mpaghara GCC.
N'eziokwu, ụlọ ọrụ ahụ na-akwado onwe ya n'ịnye ọrụ dị mma na Saudi Arabia. N'aka nke ọzọ, nzukọ a na-elekọta ndị ọrụ nzuzo na ndị gọọmenti na-arụ ọrụ na afọ ndị azụmahịa na Middle East.
N'iburu nke a, n'uche, na-enwe ọganihu na-aga n'ihu n'ime ụlọ siri ike na Saudi Arabia. N'afọ ndị gara aga, ndị isi ụlọ ọrụ na-enwe ọganihu na ụlọ ọrụ a ruo taa. Ụlọ ọrụ a nwekwara na-achọ ndị na-achọ ọrụ Philipino. Ya mere, ọ bara ezigbo uru ileta ngalaba ha na-akwụ ụgwọ na weebụsaịtị.
Ọrụ dị na Saudi Arabia na Petroleum na Transport Services Company.
Òtù Al Muhaidib
Ụlọ ọrụ ahụ bụ otu mba nzuzo nke otu ụlọ ọrụ dị na Saudi Arabia. N'akụkụ dị mma, e guzobere ụlọ ọrụ ahụ na 1943. Ruo ugbu a Abdul Kadir Al Muhaidib bụ a ezigbo ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ maka. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, Onye isi oche ndị isi nke ugbu a bụ Sulaiman A. Al Muhaidib.
Ihe mbụ ị ga-echeta na mmasị ụlọ ọrụ ahụ na-ere ákwà ụlọ. Iji tinye ya n'ụzọ ọzọ, ụlọ ọrụ ahụ na-ebubata ihe oriri na-ere ahịa kpọmkwem na ikesa osikapa na Saudi Arabia.
N'aka nke ọzọ, nke a Saudi Arabia na-anọgide na-abụ isi ahịa maka Ohere na-arụ ọrụ na Group maka South Africa. N'otu oge ahụ, ụlọ ọrụ ahụ ekwela ka ịgbasa ngalaba ndị na-ewe ndị ọrụ na GCC. N'akụkụ dị mma, ụlọ ọrụ pọtụfoliyo gụnyere ọka ndị ọzọ. N'ikpeazụ, ndị otu ụlọ ọrụ na-ahụ maka njikwa na nguzobe ya na ala eze Saudi Arabia. Inye okwu banyere Giant Stores (e mesoro jikọtara ya na Panda).
Site n'otu akaebe ruo taa, otu a nọ n'ọrụ ise na Dubai na Middle East: Ihe oriri, ala na ụlọ, ihe owuwu ụlọ, ewu na ọrụ & ihe owuwu.
Ọrụ na Saudi Arabia na Al Muhaidib Group.
Ọrụ na Arab National Bank
Ọ dị mkpa ịghọta Arab Arab Bank (ANB). Isi ụlọ akụ dị na Riyadh, n'okpuru ọnọdụ ndị a, ụlọ ọrụ na-akwụ ụgwọ na Saudi Arabia. N'ikwu okwu n'ozuzu, ụlọ ọrụ ahụ edepụtara na Saudi Stock Exchange. Ya mere ọ dị mfe iji zọpụta iji rụọ ọrụ maka. Ma i nwere ike chọta ụfọdụ ọrụ gbasara ọrụ banyere ọrụ ole na ole ebe ndị ọzọ.
Òtù ANB na-enye ọrụ nlezianya azụmahịa na ego ego. Ruo ugbu a, ị nwere ike ịnweta ọrụ na mpaghara ụlọ akụ. A tụlere ihe niile mgbe ịmalite ọrụ ọhụrụ na ụlọ ọrụ a. Site n'oge ruo n'oge nchịkọta ụlọ ọrụ maka ndị na-ere ahịa. Mba Bank Arab nwere 156 alaka na Saudi Arabia. Onye na - ekenye òkè ya bụ Arab Bank, na - ejide 40% nke ego ahụ.
Ọrụ Arab Bank na Saudi Arabia.
Òtù Ụlọ Ọrụ Balubaid (BGC)
Balubaid na-arụ ọrụ onye na acho oru ndi mmadu n’uwa n’iile. Ọrụ ọtụtụ mba nke BGC nwere karịa 1,700 ndị ọrụ na Middle East. Iji tinye ya n'ụzọ ọzọ, a kwadoro ụlọ ọrụ ahụ na 1952 karịa 65 afọ gara aga. Yabụ ọ bụrụ na ị na-achọ ọrụ ogologo oge. Nke a ụlọ ọrụ kachasị mma iji maka ọtụtụ ọrụ ọrụ.
N'uzo nile, umuntakiri ụlọ ọrụ nke Balubaid kwadoro ọzụzụ na-aga n'ihu n'ụlọ. O kwekọrọ mmepe maka ndị na-achọ ọrụ na-ahụ maka ndị mba ọzọ. Ọ bụ ezie na nke a nwere ike bụrụ eziokwu Saudi Saudi nke nzukọ ya na-eme ka ha na-azụ ndị ọrụ ọhụrụ kwa ọnwa.
Ndị otu ịbanye ụmụ akwụkwọ na ndị nlekọta ọhụrụ gụsịrị akwụkwọ. Site na mba 40 dị na Middle East, Africa, South Asia, Ndịda Ebe Ọwụwa Anyanwụ Eshia, North America na N'ezie, Saudi Arabia.
Ọrụ na Saudi Arabia na Balubaid.
Bin Quraya na Saudi Arabia
N'akụkụ aka nke ọzọ, ma ọ bụrụ na ị na-achọ ogologo oge oghere. Lelee Bin Quraya Group. Companylọ ọrụ ahụ bụ ụlọ ọrụ Saudi na-ejidere onwe ya. Managinglọ ọrụ na-ahụ maka ọrụ na BQ Rental. Ma ọ bụ otu n'ime ndị enyemaka ya na ihe ịga nke ọma azụmahịa Saudi. Companylọ ọrụ ahụ bụ nnukwu ụlọ ọrụ mgbazinye akụrụngwa dị na Saudi Arabia.
N'elu Bin Bin Quraya bu otu n'ime ugbo agha kachasi ike nke Middle East. Isi ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ nọ na Dhahran na Saudi Arabia. Maka nzube nke mmepe ụlọ ọrụ. Ụlọ ọrụ na-akwụ ụgwọ n'ime ọrụ ọhụrụ n'akụkụ nile nke Alaeze ahụ. I kwesịkwara ileta anyị Ndị otu obodo Dubai na-ejikọta. N'ihi na ụfọdụ ndị na-ahụ maka ndị ọrụ nchịkọta na-etinye ọrụ nchụpụ n'ebe ahụ.
Ọzọkwa, ị ghaghị icheta na ụlọ ọrụ a dị oke mara na Google. Karịsịa maka inweta ọrụ ha.
Nchikota maka oru
Enwere ọtụtụ nhọrọ ndị ọzọ maka ndị na-achọ ọrụ n'ụwa. Otu n’ime ha bụ ịchọta ọrụ ụlọ ezumike na Middle East. Enwekwara obodo ndi ozo ebe ndi mmadu gha acho inweta oru. Ndi ego ohuru na enweta oru n’iile n’enye ndi ubochi niile. Yabụ Chee echiche ugboro abụọ tupu ịkwaga abroad. N'aka nke ozo, I nwekwara ike icho oru banyere anyi Dubai WhatsApp Ọrụ Group. Ụzọ kachasị mma bụ itinye akwụkwọ maka ohere tupu ị kwaga Middle East.
Ụzọ kachasị mma a ga - etinye na Emirates na Saudi Arabia. Ikwu okwu n'ozuzu bu jiri ngwa mkpanaka gị dị ka ngwá ọrụ ọrụ. N'oge ahụ ndi oru ohuru choro enweghi oge iji choo oru. N'afọ ndị sochirinụ, ohere ọhụrụ ga-aga na Middle East. Dịka ọmụmaatụ, ebe kachasị ama maka ịbanye bụ Dubai na Abu Dhabi. Ya mere, ị ga-achọ ọrụ n'ọtụtụ mba ọ bụghị naanị na Ọrụ na Saudi Arabia.
Ọrụ na Saudi Arabia - Hụ ya n'anya ma jide ọrụ taa. N'aka nke ọzọ, ị ga-elekwa ụlọ ọrụ na-akwụ ụgwọ na Gulf. Anyị na-ewetara gị a Careerjet ụlọ ọrụ siri ike na Monster nyocha oru na UAE. Ha bara uru ka itinye ha na CV gị.
Bulite Abume maka Ọrụ na Saudi Arabia!
Ịchọrọ ịchọta a Saudi Arabia Ọrụ? n'agbanyeghị na nke a nwere ike ịbụ eziokwu anyị nwere ike inyere gị aka.
Mụ na ụlọ ọrụ Dubai City ị nwere ike ịmalite ọrụ ọhụrụ Saudi Arabia!
Bulite Na-amalite gaa Obodo Na-arịwanye Elu Na Ụwa! - Ọrụ na Riyadh